dabali *, Author at www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more Follow
/ Sun, April 30, 2017
चैत्र २७ गते, २०७३ - २१ः०४
आज पनि बस्न सकेन मन्त्रिपरिषद् बैठक
काठमाडौं, २७ चैत । संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव पेश गर्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बस्ने भनिएको बैठक पनि बस्न सकेन । चैत ३ गते यता मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छैन ।
उपप्रधानमन्त्रीको बरियता विवाद कारण मन्त्रिपरिषद्... चैत्र २७ गते, २०७३ - १६ः१८
लतालाई बिर्साउने समीक्षा बस्नेतको श्वर (भिडियोसहित)
काठमाडौं । नेपाली गायिका तारादेवीलाई बिर्साउने गीत गाउँन सक्ने समीक्षा बस्नेतले हिन्दी गीत पनि उस्तै गाएर भारतीयहरुलाई चकित पारेकी छन् ।
चार महिनाअघि मात्रै गायन प्रतियोगितामा भाग लिएर निर्णायक मण्डलबाट दोस्रो... चैत्र २६ गते, २०७३ - १८ः२७
मनिला, २६ चैत । फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ ।
स्थानीय समय अनुसार शनिबार ३ बजेर ८ मिनेट जाँदा ५.९ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको अमेरिकी भूगर्भ विभाग (युएसजीएस)ले जनाएको छ । भूकम्पको केन्द्र विन्दु मिन्डोरो प्रान्तमा... चैत्र २६ गते, २०७३ - १८ः०३
संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव दर्ता गर्छौंः प्रचण्ड
काठमाडौं, २६ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनको अर्को नयाँ प्रस्ताव दर्ता गरिने बताएका छन् ।
शनिवार रिपोटर्स क्लवको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा प्रचण्डले संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव... चैत्र २६ गते, २०७३ - १७ः३७
चुनावी प्रचारको नयाँ शैली अपनाउँदै विवेकशील पार्टी
काठमाडौं, २६ चैत । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएका बेला युवाहरुले नयाँ किसिमको चुनावी प्रचार शैली अपनाएका छन् । देशभर युवा सञ्जाल बढाउँदै लगेको विवेकशील नेपाली दलले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी चुनावी प्रचार थालेका... चैत्र २६ गते, २०७३ - १६ः३९
वैद्य माओवादीमा अर्को भाँडभैलो
काठमाडौं, २६ चैत । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीमा फेरि अर्को भाँडभैलो शुरु भएको छ । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको पछिल्लो सचिवालय वैठकले पाँच जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा बढुवा गरेपछि पार्टीमा... चैत्र २६ गते, २०७३ - १८ः२२
ओली उपचार गर्न बैंकक लागे
काठमाडौँ, २६ चैत । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपचारका लागि आज थाइल्यान्डको बैंकक प्रस्थान गरेका छन् ।
उनी नियमित उपचारका क्रममा बैंकक गएको उनका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी गराए ।
उनी दिउँसो थाई... चैत्र २५ गते, २०७३ - २०ः४९
तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउँदै अमेरिका ! शक्ति राष्ट्रहरु विभाजित
काठमाडौं, २५ चैत । सिरियामा विद्रोहीको कम्जामा रहेको शहर इडलिवमा ‘रासायनिक’ हमलामा कम्तीमा ८० जनाको मृत्यु भयो, मृत्यु हुनेमा केही बच्चा समेत थिए ।
सयौंको संख्यामा छाला जलेर गम्भीर घाइते भएका छन् । विपक्षी दल तथा... चैत्र २५ गते, २०७३ - २०ः०६
अमेरिकी कम्पनीसँग वाइड बडी जहाज खरिद सम्झौता
काठमाडौं, २५ चैत । नेपाल वायुसेवा निगमले अमेरिकी कम्पनीसँग वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । निगमको इतिहासमै पहिलो पटक वाइड बडी जहाज खरिद सम्झौता भएको हो । निगम र अमेरिकन कम्पनी एएआरबीच शुक्रबार खरिद सम्झौता... चैत्र २५ गते, २०७३ - १९ः५७
अमेरिकाको पक्षमा फ्रान्स र जर्मनी, असदलाई नै दोषी देखाइयो
पेरिस, २५ चैत । सिरियामाथि अमेरिकाले थालेको आक्रमण जायज भन्दै फ्रान्स र जर्मनीले सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असदलाई नै दोषी देखाएको छ ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रास्वाँ आलान्द र जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले शुक्रबार... 1
kdbali_posts.post_date > '2017-04-23 06:54:12'
[post_date] => 2017-04-28 10:57:19
[post_date_gmt] => 2017-04-28 05:12:19
[post_content] => काठमाडौं, १५ वैशाख । नेपालको तीन विभिन्न क्षेत्रको भविष्यमा ठूलो भूकम्प जाने परिकल्पना गर्दै सरकार नेतृत्वको एक अध्यनले भवन निर्माणको अवस्था अहिलेको जस्तो भए काठमाडौंमा ठूलो जनधनको क्षति हुने बताईएको छ । बिहिवार साँझ बीबीसी नेपाली सेवाले तयार पारेको रिपोर्टनुसार जापानी विज्ञसहितले गरेको अध्ययनले सन् २०१६ देखि सन् २०३० सम्ममा करिब ५० हजार मानिसको ज्यान जानेगरि ठूलो भूकम्प आउने उल्लेख छ । बीबीसी रिपोर्टअनुसार झण्डै पौने तीन लाख घर ध्वस्त हुने बताइएको छ ।
विज्ञहरुलाई भूकम्पिय प्रवृतिको आधारमा चार खण्डमा विभाजन गरेका छन् महाकालीदेखि कालीगण्डकी र मस्र्याङदीदेखि सुनकोसी र मेचीसम्म । लामो समयदेखि भुकम्प नगएको र ०७२ सालमा गएको भूकम्पको पूर्ण सञ्चित शक्ति निकास नभएकाले ठूलो भूकम्प जाने खतरा भएको बताइएको हो ।
सदुरमध्येपश्चिम नेपाल, पश्चिम नेपाल र मध्ये नेपाल दक्षिण गरी तीन थरी सिनारियो भूकम्पको परिदृश्य विज्ञहरुले गरेका छन् । सदुरमध्येपश्चिम नेपालमा ८ दशमलव ६ रेक्टरको भूकम्प जाने बीबीसी रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसलाई काठमाडौंलाई ठूलो असर भने नगर्ने उल्लेख छ । तर ७ दशमलव ८ रेक्टरको पश्चिम नेपाल र मध्ये नेपाल दक्षिण परिदृश्य भूकम्पले राजधानीमा धेरै क्षति हुने बताइएको छ ।
उक्त रिपाेर्ट सुन्नका २० मिनेट ३५  मा क्लिक गर्नुपर्ने छ । यो रिपाेर्टले नेपालीहरू सबै अातंकीत भएका छन् ।
सुन्नुहोस् बीबीसीको एक रिपोर्ट
[post_title] => ८.६ रेक्टरको भूकम्प जाने बीबीसी रिपोर्टः ५० हजारको ज्यान जानसक्ने (अडियोसहित)
[post_name] => %e0%a5%ae-%e0%a5%ac-%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%ad%e0%a5%82%e0%a4%95%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%aa-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ac
[post_modified] => 2017-04-28 11:31:37
[post_modified_gmt] => 2017-04-28 05:46:37
[guid] => http://www.khabardabali.com/?p=129196
[ID] => 129131
[post_date] => 2017-04-27 18:22:40
[post_date_gmt] => 2017-04-27 12:37:40
[post_content] => काठमाडौं, १४ वैशाख । सरकारले असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई मनाउन नयाँ प्रस्ताव राखेको छ । सरकारका तर्फबाट उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेताहरुसँग छलफल गर्दै विराटनगर र वीरगन्ज महानगरपालिका बनाउने नयाँ प्रस्ताव राखेका हुन् । मधेसी मोर्चालाई मनाउन सरकारले ११ जिल्लामा स्थानीय तह थप्नेबारे गृहकार्य थाल्ने भएको छ ।
बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउनेबारे मधेसी मोर्चा र हाम्रो मिलेको बताए । विराटनगर र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउनुपर्ने माग आएकाले यसबारे पनि सरकारको ध्याना गएको मन्त्री थापाले बताए । मधेसका कुन कुन जिल्लामा स्थानीय तह कसरी थप्नुपर्ने हो भन्नेबारे मापदण्ड र प्राविधिक कार्य गर्न भन्दै थापाले बैठकमा उपस्थित मन्त्रालयका अधिकारीलार्इं दुई दिनको समय दिए ।
बैठकमा मन्त्री थापाले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने कुरा गर्दा उही आयोगको सिफारिसलाई आधार मानेको हो, त्यसैले तपाईंहरु संख्या थपिनेमा ढुक्क हुनुस् ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री थापा, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल, एमाले नेता अग्निप्रसाद खरेललगायत सहभागी थिए ।
[post_title] => सरकारको नयाँ प्रस्तावमा एमाले-मधेसी मोर्चा दुबै सहमत
[post_name] => %e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%81-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%ae%e0%a4%be
[post_modified] => 2017-04-28 06:04:38
[post_modified_gmt] => 2017-04-28 00:19:38
[guid] => http://www.khabardabali.com/?p=129131
[ID] => 128610
[post_date] => 2017-04-24 14:19:59
[post_date_gmt] => 2017-04-24 08:34:59
[post_content] => काठमाडौं, ११ वैशाख । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पहिलो चरणको चुनाव हुने बित्तिकै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने विषयमा प्रश्न उठाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवासमा सोमबार बसेको स्थायी कमिटि बैठकले जेठको पहिलो सातामा प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमतिमा प्रश्न उठाएको हो ।
त्यस्तै एमालेले मधेसी मोर्चा चुनावमा आउने ग्यारेन्टी र बजेटअघि नै दोस्रो चरणको चुनाव गराउने अवस्थामा मात्र दुई चरणको चुनाव गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । संविधान संशोधन विधेयक ल्याए संसदको प्रक्रिया अवरुद्ध नगर्ने तर, बिधेयक असफल पार्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । चुनाव नगराउने खेलमा सरकार लागेको एमालेले गम्भीर आरोप लगाएको छ ।
एमाले सचिव तथा प्रचार बिभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, ‘हामी वैशाख ३१ गते नै चुनाव होस भन्ने चाहन्छौं, तर सरकार अनेक बहाना बनाएर चुनाव टार्न खोज्दैछ ।’ बजेट अगाडि नै दोस्रो चरणको चुनाव हुने र बाँकी दलहरुले पनि भाग लिने वातावरण बनाउने ग्यारेन्टी गरेर सरकार छलफल गर्न आउछ भने हामी छलफलका लागि तयार छौं’ भट्टराईले भने ।
मधेसी मोर्चा चुनावमा भाग लिने ग्यारेन्टी र बजेट अगाडि दोस्रो चरणको चुनाव गर्ने भए लचिलो हुने एमालेको निर्णय छ ।
[post_title] => एमालेले भन्यो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु हुँदैन
[post_name] => %e0%a4%8f%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%ad%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%8b-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%9a%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88
[post_modified] => 2017-04-24 16:35:59
[post_modified_gmt] => 2017-04-24 10:50:59
[guid] => http://www.khabardabali.com/?p=128610
[post_date] => 2017-04-24 16:27:59
[post_date_gmt] => 2017-04-24 10:42:59
[post_content] => काठमाडौं, ११ वैशाख । चार नम्वर प्रदेशका चर्चित नेता गुप्त हमाल ‘सन्देश’ माओवादी केन्द्रमै सक्रिय राजनीति गर्ने भएका छन् । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि निष्क्रिय रहेका हमाल माओवादी केन्द्रको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका हुन् ।
दोस्रो संविधान सभापछि निष्क्रिय रहेका हमाललाई नयाँ शक्तिका नेताहरुले चार नम्वर प्रदेशको सहसंयोजकको जिम्मेवारी दिएको भन्दै प्रचार गरेका थिए । तर, हमालले नयाँ शक्तिको जिम्मेवारी नलिई निष्क्रिय रुपमा व्यवसाय गर्दै आएका थिए ।
सोमबार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेपछि हमाल सक्रिय राजनीतिमा आएका हुन् । हमाल सक्रिय राजनीतिमा आउने भएपछि पर्वत र कास्की जिल्लाका माओवादी केन्द्रका नेताहरु उत्साहित भएका छन् ।
हमाल तीन दशकदेखि गण्डकी, धौलागिरीको संगठनमा सक्रिय रहँदै आएका नेता हुन् । मोहन बिक्रम सिंहको नेतृत्वको मसालबाट २०५४ सालमा विद्रोह गरेर माओवादीमा आएका हमाल कुशल संगठक र योजनाकार मानिन्छन् ।
[post_title] => नेता हमाल माओवादी केन्द्रमा फर्किए, कास्की र पर्वतमा खुशीयाली
[post_name] => %e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%93%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%8d
[post_modified] => 2017-04-24 16:27:59
[post_modified_gmt] => 2017-04-24 10:42:59
[guid] => http://www.khabardabali.com/?p=128634
[post_date] => 2017-04-25 17:31:42
[post_date_gmt] => 2017-04-25 11:46:42
[post_content] => काठमाडौं, १२ वैशाख । नयाँ शक्ति नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमबीच चुनाव अघि नै एकता हुने भएको छ । चुनाव चिन्ह नपाएपछि अप्ठ्यारोमा परेको नयाँ शक्तिले फोरमकै चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्ने गरी आयोगलाई जानकारी दिइएपछि भविष्यमा अप्ठ्यारो नहोस् भनेर दुबै दलबीच चुनाव अघि नै एकता हुने भएको हो ।
यसअघि नै एकता हुने भनिएकोमा बाबुरामलाई अध्यक्ष स्वीकार्न उपेन्द्र यादव तयार नभएपछि एकता प्रक्रिया रोकिएको थियो । श्रोतका अनुसार, चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्ने शर्तमा बाबुरामले उपेन्द्र यादवको नेतृत्व स्वीकार गरेर भएपनि एकता गर्ने भएका हुन ।
एकता गर्दा नयाँ पार्टीको झण्डा भने नयाँ शक्तिकै रहने सामान्य समझदारी दुबै दलबीच भएको छ ।
नयाँ शक्तिका पहाडी जिल्लामा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले धमाधम पार्टी परित्याग गरिरहेको बेला तराई मधेसको भोट बैंक जोगाउन तत्काल उपेन्द्र यादवको नेतृत्व स्वीकार्न बाबुराम तयार भएको श्रोतले बतायो । यद्यपी महाधिवेशनपछि भने आफू अध्यक्ष हुन सक्ने आँकलन गरेर बाबुरामले उपेन्द्र यादवलाई अहिले नेता मान्न तयार भएको देखिन्छ ।
नयाँ शक्ति नेपाल र फोरमबीच एकता भएमा नयाँ पार्टीले फोरमको हालको चुनाव चिन्ह मसालमा भोटका लागि अपील गर्ने छन् ।
[post_title] => उपेन्द्रलाई बाबुरामले अध्यक्ष स्वीर्कारेपछि हुने भयो एकता तर झण्डा भने नयाँ शक्तिको राखिने
[post_name] => %e0%a4%89%e0%a4%aa%e0%a5%87%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%85%e0%a4%a7
[post_modified] => 2017-04-25 17:31:42
[post_modified_gmt] => 2017-04-25 11:46:42
[guid] => http://www.khabardabali.com/?p=128806
[ID] => 129119
[post_date] => 2017-04-27 17:53:28
[post_date_gmt] => 2017-04-27 12:08:28
[post_content] => काठमाडौं, १४ बैशाख । जसको खलो उस्को दाँई, नेपालीमा एउटा उखान प्रचलित छ । २०४६ सालपछि नेपाली काँग्रेसले ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम ल्यायो । गाविसलाई एकमुष्ठ रुपमा अनुदान दिने व्यवस्था ग¥यो । बुद्धु काग्रेसले त्यसको प्रचार प्रसार गर्न जानेन । वार्षिक बजेट मार्फत ल्याइएको सो कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारको सोझै बजेट पु¥याउने पहिलो जनपक्षीय निर्णय थियो ।
‘काँग्रेसको ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम चोरेर एमालले आफ्नो गाँऊ आफै बनाऊ बनाइएको थियो’
हुँदै नहुनु भन्दा कानो मामा नै निको भने जस्तै गाविस तहमा बजेट दिने परम्पराको सुरुवात काँग्रेसले गरेको थियो । काँग्रेसले त्यो मात्रै होइन, गाविस स्तरमा जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने खालका अन्य कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको थियो । तर प्रचार प्रसार नहुँदा काँग्रेसको कार्यक्रम ओझेलमा प¥यो हरायो । पछि छट्टु एमालले सोही कार्यक्रमको नाम फेरेर ‘आफ्नो गाँऊ आफै बनाऊ’ भन्ने बनायो ।
लक्ष्य उही थियो, कार्यक्रम उही थियो, उद्देश्य पनि उही थियो । काँग्रेस सरकारले रु ५० हजारको बजेट उपलब्ध गराएको थियो । वार्षिक रुपमा बजेट बढाउँदै लैजाने काग्रेसको घोषणा थियो । तर एमालले एकै पटक रु पाँचलाखको बजेट आफ्नो गाँऊ आफै बनाऊ नाममा गाविस स्तरमा नै बजेट दिने कार्यक्रम ल्यायो । बुद्धु र छट्टु हुनुको भेद यही छ । काँग्रेसले प्रचार गरेन , एमालले प्रचार ग¥यो र काँग्रेसको ग्रामीण स्वालम्बन कार्यक्रम ओझेलमा प¥यो ।
प्रचण्डले बढाएका थिए समाजिक सुरक्षा भत्ता
एमालले वृद्ध वृद्धालाई रु एक सय सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने अर्को कार्यक्रम ल्यायो । २० वर्षसम्म सुरक्षा कार्यक्रममा कुनै परिवर्तन भएन । जब तत्कालीन नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार बन्यो तब सामाजिक सुरक्षा भक्तामा १५० प्रतिशत वृद्धि भयो । ७५ वर्षको उमेर हदलाई ७० बनाइयो । एकल, महिला, कर्णाली क्षेत्रका वृद्ध वृद्धालाई ६० वर्षमा नै समाजिक भक्ता दिने अभियान सुरु भयो । एमालले उठाएर छाडेको कार्यक्रमलाई माओवादीले गति दियो, संस्थागत ग¥यो ।
पछिल्लो पटक गरिबका लागि सरकार कार्यक्रम अगाडि आएको छ । यो कार्यक्रम विगतको भन्दा फरक कार्यक्रम हो तर खड्ग ओलीहरु अरुका राम्रा एजेण्डा चोर्न सिपालु छन् । उनीहरु केवल हल्लाका लागि काम गर्छन, उनीहरुलाई जनताको जीवनस्तरसँग कुनै सरोकार छैन । विगतमा काँग्रेसले ल्याएको ग्रामीण स्वालम्बनको नारा चोरेर एमाले सेठ भयो र आफूले नै सबै गरेको घोषणा गरायो ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछिको सरकारले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्यायो । आज एमाले भन्दैछ त्यो कार्यक्रम हाम्रो हो, माओवादीले चो¥यो । युवालाई स्वरोजगार बनाउने विभिन्न उपायको खोजी गर्ने भन्ने कार्यक्रम नेपाली काँग्रेसले २०४८ सालको निर्वाचन पछि गठन भएको सरकारले ल्याएको थियो । २०४८ सालको निर्वाचन पछि गठन भएको सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा फरक नपर्ने काँग्रेस नेता धनराज गुरुङको भनाइ छ ।
गत साल खड्ग ओली प्रधानमन्त्री भए । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ०.०१ प्रतिशत थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदन पूरानो भएको छैन । चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने देखिएको छ ।
खड्ग ओलीले धेरै हल्ला गरेका थिए । समुन्द्र नै नभएको मुलुकमा पानी जहाज चलाउने सपना बेचे । हवाई सपनाको त्यो फेहरिस्त पानीको फोका भन्दा फरक थिएन । ओलीले हावाबाट विजुली निकाल्ने अर्को सपना पनि बेचे । जुन कम्पनी उनले छानेका थिए, त्यो फटाहा कम्पनी थियो । जसको अधिकृत पूँजी एक डलर मात्रै थियो । ब्रिटिश गोर्खा नामक कम्पनीको हवाई सपनामा ओली बहकिएका थिए । पानी जहाज समुन्द्रमा चल्छ, चलाउन सकिन्छ । तर नेपाल भित्रै पानी जहाज चलाउने हवाई सपना बाड्ने ओली कति मूर्ख थिए भन्ने सिद्ध भइसकेको छ ।
सडक विस्तारमा समेत खड्ग ओलीको विरोध थियो
काठमाडौंमा सडक विस्तार हुँदै थियो । ओली त्यसको विरोध गर्न उक्साउँथे । मुद्दा हाल्न आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गर्दथे । राजधानी उज्यालो बनाउने योजना सरकारले ल्याउँथ्यो , ओली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटलगायतलाई उचाल्थे र यो सम्भव छैन भन्न लगाउँथे । तर सिंहदरबारबाट आफै भन्थे लोडसेडिङ हटाइन्छ । पछिल्लो पटक विद्युत् चोरीमा २४ जना प्राधिकरणका कर्मचारी समातिए, त्यसमा ओलीको पार्टीका मात्रै १६ जना परे ।
आज फेरी ओली भन्दैछन् लोडसेडिङ त हामीले हटाएको हो । उनी प्रधानमन्त्री हुँदासम्म त १२ घन्टा लोडसेडिङ थियो तर उनी त्यो सम्झदैनन् । माओवादी , काँग्रेसले दिएको विजुली नबाल्ने भन्दै ओलीकै पार्टीको नेता राजेन्द्र पाण्डेले त धादिङमा ह्वीप नै लगाए । गत साल आर्थिक वृद्धि ०.०१ प्रतिशत थियो , यस वर्ष सात प्रतिशत पुगेको छ, अब एक दिन ओलीले फेरी भन्नेछन् यो सबै हवाई कल्पना हो । उनी अरुले राम्रो गरेको देखिसहँदैनन्, अरुको उछित्तो काढ्न मात्रै उनलाई आउँछ भन्ने घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेस र माओवादीको एजेण्डा चोरेर, त्यसको नाम परिवर्तन गरेर, त्यसमा पालिस लगाएर स्याललाई बाघको खोल ओढाउने खेलो फड्कोमा मात्रै ओली अब्बल छन् । २०४६ सालपछि सबैभन्दा बढी समय एमाले सरकारमा रह्यो । एमालले कुन वर्ष आर्थिक वृद्धि बढाउन सक्यो त ? एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी नै भन्छन् ‘हल्ला गरेर हुन्न, एमालेले गर्न नसकेकै हो । सार्वजनिक कार्यक्रममा अधिकारीले दर्जनौ पटक भाषण गरेका छन् । गर्न नसकेको विषय समेत एमाले स्वीकार गर्न सक्दैन ।
समस्या सुल्झाउन कि माओवादी , कि काँग्रेस नै चाहिन्छ
अरुको खुट्टा काटेर आफू अग्लो बन्छु भन्ने मानसिकतामा एमाले छ । अरुको अस्तीत्वलाई स्वीकार गर्नै नसक्ने बालरोग एमालेमा छ । जसका कारण मुलुक अधोगतिमा गएको हो । एमालेका कारण मुलुक समस्या पर्छ, सुधार गरिदिन कि त माओवादी आउनुपर्छ, कि त काँग्रेस तम्सनु पर्छ । काँग्रेसको एजेण्डा चोरेर आफ्नो बनाउने र हिरो बन्ने छुट छैन एमालेलाई । काँग्रेस नेता धनराज गुरुङले टुइटमा लेखेका छन् ‘ नेपाली काँग्रेसले २०४८ सालमा सुरु गरेको ग्रामिण स्वालम्बन कार्यक्रमको अर्को नाम हो आफ्नो गाँऊ आफै बनाऊ कुरा सक्कली नै गरौ ।’’
[post_title] => यसरी चोर्यो एमालेले अरुको एजेण्डा
[post_name] => %e0%a4%af%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%9a%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%8b-%e0%a4%8f%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%85%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%95%e0%a5%8b
[post_modified] => 2017-04-28 09:19:37
[post_modified_gmt] => 2017-04-28 03:34:37
[guid] => http://www.khabardabali.com/?p=129119
[found_posts] => 338
८.६ रेक्टरको भूकम्प जाने बीबीसी रिपोर्टः ५० हजारको ज्यान जानसक्ने (अडियोसहित)सरकारको नयाँ प्रस्तावमा एमाले-मधेसी मोर्चा दुबै सहमतएमालेले भन्यो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु हुँदैननेता हमाल माओवादी केन्द्रमा फर्किए, कास्की र पर्वतमा खुशीयालीउपेन्द्रलाई बाबुरामले अध्यक्ष स्वीर्कारेपछि हुने भयो एकता तर झण्डा भने नयाँ शक्तिको राखिनेयसरी चोर्यो एमालेले अरुको एजेण्डा Team Khabardabali